Kulanka ku celiska ah oo ay gurigeeda ku ciyaari doonto Man City | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Kulanka ku celiska ah oo ay gurigeeda ku ciyaari doonto Man City
Kulanka ku celiska ah oo ay gurigeeda ku ciyaari doonto Man City
Muqdisho – Kooxda Championshipka ee Sky Bet ayaan arkinGuul daro lix kulan oo waxa ay ku guuleystay horyaalka in aan laga badin Kulamadaas kulankii ugu danbeeyay ayaana ku soo dhamaaday barbaro 1-1 ah ee ay la gashay Barnsley isbuucaan laakiin waxa ay ku sii jiraan tartanka hanashadiisa Lagu Jiro.
Kooxda David Wagner ayaa wejigi kale ku qaabili doona safarka ay City ku tagayaan si kulanka ku xiga ee Championship uga helaan yiddidiilo ku aadan Kooxda kaalinta 1aad ku jirta ee Newcastle Sabtida marka ay is qaabilaan.
Tababaraha Terriers wuxuu noqon doonaa mid taribuunka ka daawada Ciyaarta u dhaxayn doonta City iyo Newcastle ka dib markii la dul dhigay ganaax laba kulan ah iyo ganaax ah £ 6,000 ka dib markii uu feeray dhigiisa Leeds Garry Monk 5 February.
Dhanka kale, City ayaa ciyaaray kaliya hal jeer tan iyo markii ay wada ciyaareen Huddersfield, waxa ay garaaceen Monaco oo ay ku dhufteen 5-3taas oo ah Guul weyn Champions League wareega 16ka kulanka lugta hore ee Etihad Stadium ka dhacay.
Ku guuleystaha kulanka arbacada maanta ah ee ku celiska FA Cup ayaa waxa uu wajihi doonaa Middlesbrough ee wareega quarter-finalka ee Riverside ka qabsoomaya 11 March
Wararka Ka cusub Kooxahan
Daafaca kooxda Manchester City Gael Clichy ayay u badan tahay in la heli karo ka dib dhaawac dhabarka ahKulanka arbacada maanta ah ee ku celiska FA Cup.
Vincent Kompany ayaa weli maqan, laakiin waxa uu ku dhow yahay inuu soo laabto taam ahaanshihiisa.
City ayaan lahayn dhaawacyo kale oo cusub, laakiin Guardiola ayaan weli go’aansan Willy Caballero ama Claudio Bravo midka uu ku soo bilaabi doono goolka , halka weeraryahanka Gabriel Ciise uu cagta ka dhaawacan yahay iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ilkay Gundogan oo jilibka ka dhaawacan ayaa la maqnaan doona muddo dheer dhaawacyo.
Huddersfield mar kale waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanka khadka dhexe Aaron Mooy, kaas oo aan ka horimaan karin kooxda iska leh ee City.
Sean Scannell iyo Harry Bunn ayaa labadoodaba ku soo laabtay tababarka oo laga yaabaa in ay ciyaaraan laakiin Nahki Wells ayaa shaki uu ku jiraa dhibaato uu ka qabo canqowga, halka Christopher Schindler iyo Kasey Palmer ay ku maanyihiin dhaawacyo.
Iska Hor imaadkooda
Labada kooxood ayaa ku kulmay laba jeer oo hore FA Cup, iyadoo Manchester City ay badiyeen labadaba, inkastoo loo baahday laba ku celis kulankii ugu dambeeyey ee 1988.
kooxda Huddersfield ayaa guuldaradii 10-1 aayaa u ahayd khasaaraha ay Manchester City Division Two kala Kulantay Bishii November 1987dii.
City ayaan laga badinin todobadii kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan (W5, D2).
Waxa ay kaliya ku guuleystay mid ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeysay ee ay FA Cup la ciyaarto Kooxaha horyaalka heerka hoose (D1, L2).
Pep Guardiola ayaa marna laga reebin tartan koob ay la ciyaarayso Koox Heerka hoose uu la qaatay isaga oo macalin ah.
Yaya Toure ayaa dhaliyay Gool labada wareeg ee FA Cup ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Huddersfield ayaan laga badinin sagaal kulan oo tartamada oo dhan (W7, D2).
Manchester City iyo Huddersfield ayaa ah labada kooxood ee kaliya ee aan weli gool laga dhalin xilli ciyaareedkan FA Cup. Waxa ay dhaliyeen sideed.
Terriers ayaan gaarin wareega quarter-finalka ee FA Cup tan iyo 1971-72.
Huddersfield ayaa ku guuleystay FA Cup 1922.
City ayaa lagaga badiyay 1-0 labadii kulan ee ugu danbeysay ee ay garoonkooda kula Ciyaartay Huddersfield (tartamada oo dhan), labadaba waxa ay ahaayeen heerka labaad, bishii November 1997 iyo 1999.
Dhab ahaantii, City ayaan kaga adkaan afartii kulan ee Terriers ee gurigeeda aadeen tan iyo guushii horyaalka heerka labaad 10-1 bishii November 1987 (D2 L2).
Huddersfield emarkii ugu danbaysay ee ay ka reebtay koox Premier League ka FA Cup waxa ay ahayd 2008, oo ay ku garaacday 2-1 Birmingham gurigeeda wareega saddexaad.
Terriers ayaa laga badiyay lix kulan ee ugu dambeysay ay meel ka baxsan Guriigeeda ku soo ciyaartay FA Cup Kooxaha heerka1aad ee Horyaalka ,waxaa laga dhaliyay 17 gool mudadaas ugu yaraan halkii kulanba waxaa laga dhalinayay labo Goool.
Terriers ayaa ku guuldareysatay inay shabaqa gaaraan afar ka mid ah shantii kulan ee FA Cup ay la ciyaartay Manchester City (D3 L2).
Laba ka mid ah sadaxdii kulan ee la soo dhaafay FA Cup ee u dhexeeya labadaan kooxood ayaa ku dhamaaday 0-0.
Ka hor xilli ciyaareedkan, Man City ayaa ka hartay koobka FA Cup waliba garoonkeeda Kooxaha horyaalka hoose labo ka mid ah saddex xilli ciyaareed ee la soo dhaafay waana (Wigan 2014 iyo Middlesbrough 2015).
Kulanka: Manchester City vs Huddersfield Town
Tartanka : The FA Cup – 5th Rnd
Waxaa diyaarisay: Hanaa Maxamed Maxamud.
Previous: Dhageyso: Warbixin ku saabsan Maalinta Caalamiga ee Ciribtirka Takoorka
Next: Kulanka Real Madrid iyo Las Palmas ee horyaalka La Liga